ကပ်ကြီးပြီး ရင် ဘယ်ကို စသွားမလဲ ၊ ဘယ်ကို ဆက်သွားမလဲ ? | yathar Magazine
ဒီမေးခွန်းကို မေးရင်တော့ ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ဘုရားစသွားမယ် ။ ရွှေတိဂုံဘုရားလည်း မရောက်ဖြစ်တာ နှစ်ပေါက်လုနီးနီးပဲ ။
နောက်တစ်နေရာလို့ ပြောရင် ဝါးတီးလည်း ဝေးတာ နည်းနည်းကြာပြီ လေ ။
ရန်ကုန်မြို့ က Food Court တွေမှာ ဝါးတီးပတ်စားမယ် ။
လက်လှမ်းမှီသလောက် ရန်ကုန်မြို့က Food Court List လေးတွေ ပြောပြပေးမယ် ။
အစီအစဉ်တူရင် မင်မင်နဲ့ တူတူ သွားဆွဲကြတာပေါ့ ။
(1) Food Streat ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် မှာ ရှိပါတယ် ။ အခုတော့ Junction City (5) လွှာမှာ စဖွင့်နေပြီပေါ့ ။ ရိုးရာမုန့်တွေ ၊ မြန်မာထမင်းဟင်း နဲ့ အခြားနိုင်ငံတကာ အစားအစာတွေ လည်းကောင်းတယ် ဗျ ။ ဒီနေရာလေး အရင် သွားကြတာပေါ့ ။
(2) မုန့်ဈေးတန်း – Mont Zay Tan FoodCourt လည်း တော်တော်ကောင်းတယ် ။ အစားအသောက်လည်း တန်တယ် ၊ အရသာလည်းကောင်းတယ် ။ အအေး၊ဖျော်ရည် အစုံလည်းရတယ် ။ မုန့်ဈေးတန်းဆိုတဲ့ အတိုင်း ၊လက်ရာအမျိုးမျိုး အစားအစာ အမျိုးမျိူး ရနိုင်တဲ့ ဒီနေရာလေး ထပ်သွားကြမယ် ။ ဘယ်မှာလဲ ဆိုတော့ St.John City Mall မှာနော် ။
မှောင်လည်း မှောင်ရော ပေါ့ ။ ညနေကလည်းစောင်းပြီလေ ……
ခြေဦးက Bar တွေ ဘက်က လှည့်ချင်လာပြီ ။ မထူးတော့ပါဘူးလေ … လှည့်လက်စနဲ့ လှည့်လိုက်ကြတာပေါ့ ။
မနက်ကမှ ဘုရားသွားတယ် ။ အခုကြ မင်းထက် နိဗ္ဗာန်ကို မလိုချင်ဘူးတဲ့လား ။
ဘယ်သွားမယ်ခြေဦးလှည့်ထားလဲ သိလိုက်လား ?
The Myst Bar ပေါ့ ။ Chill ဖို့ ၊ Rave ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလေ ။
Packages လေးတွေ လည်း မဆိုးဘူး ။ ဒီဇိုင်းကာလာ ဘာညာအနေအထားလည်း မိုက်တယ် ။
DJ ရော ငါတို့ ကြိုက်တဲ့ Lineup ပါရဲ့ လား တစ်ချက် ကြည့်လိုက် ၊ မိုက်တယ်ဆို စလိုက်ရအောင် ။အရမ်းကြီးလည်း မဖြုတ်လိုက် နဲ့ ကိုယ်လူ ၊ ကောင်မလေးတွေ Show နေတယ် ၊ အထာနဲ့ နေ ။အရင်လို ညနက်သန်းခေါင်ထိ ပြန်ပြီး ပွေးကြမယ် ။ ရန်ကုန်မြို့ကြီး အမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းလာပါစေ ။
ကိုဗစ်ရေ မင်းမြန်မြန် ပြီးသင့်ပြီ ။